ပထမချစ်သူနဲ့ ကွဲပြီး ဒိုတိယချစ်သူနဲ့ လက်တွဲနေရတဲ့ အချိန် ကောင်းခြင်း (၁၀) ချက် - APANNPYAY
/ ပထမချစ်သူနဲ့ ကွဲပြီး ဒိုတိယချစ်သူနဲ့ လက်တွဲနေရတဲ့ အချိန် ကောင်းခြင်း (၁၀) ချက်
ပထမချစ်သူနဲ့ ကွဲပြီး ဒိုတိယချစ်သူနဲ့ လက်တွဲနေရတဲ့ အချိန် ကောင်းခြင်း (၁၀) ချက်
ချစ်ဦးသူနဲ့ ကွေကွင်းရပြီး နောက်ထပ်အချစ်သစ်နဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာ ပိုပျော်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ တကယ်ရော မှန်ကန်ရဲ့လား? အကြောင်းရင်းကတော့ ပထမအချစ်မှာ ထိခိုက်နာကျင်စရာတွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ရလို့ ဒါမှမဟုတ် အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး စာပိုတတ်သွားလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒုတိယအချစ်က အချစ်ဦးထက် သာလွန်ကောင်းမွန်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း (၁၀)ခု ကို ဖော်ပြလိုပါတယ်။
၁။ မိမိတန်ဖိုးကို သိရှိလာလို့ပါ။
ဒုတိယအချစ်နဲ့ တွေ့ဆုံကြချိန်မှာ အများစုက လောကကြီးအကြောင်းကို သိရှိနားလည်လာကြပြီး ကိုယ့်တန်ဖိုးကို ကိုယ်တိုင်မြှင့်တင်ထားတတ်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အရည်အချင်း၊ ကိုယ့်တန်ဖိုးကို သေချာသိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုမိုထိုက်တန်တဲ့သူမျိုးနဲ့ နဖူးစာဆုံတတ်ကြရပါတယ်။
၂။ ကတိသစ္စာတရားကို ပိုတန်ဖိုးထားတတ်လာလို့ပါ။
ဒီအချက်က တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်လာတာနဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်။ ပထမအချစ်ဦးနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဆိုရင် နှစ်ဦးစလုံးက ချစ်သူနှစ်ဦးကြားက ကတိသစ္စားတရားကို အပြည့်အ၀နားလည်နိုင်ဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ချစ်သူနှစ်ဦးကြားက ကတိသစ္စာဆိုတာက လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာရှိနေပေးတာ၊ ချိန်းတဲ့နေ့မှာ ရောက်လာပေးတာတွေအပြင် နှစ်ဦးသားအနာဂတ်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာ၊ ရည်မှန်းချက်တွေထားရှိ လျှောက်လှမ်းတာတွေကိုပါ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ရိုးသားမှုက အရေးကြီးတာကို သိလာလို့ပါ။
ပထမအကြိမ်မှာ သင့်ချစ်သူရဲ့ အချို့သောလျို့ဝှက်ထိန်ချန်မှုတွေကို သင်ခွင့်ပြုထားမိမှာပါ။ တကယ်တော့ ဒီလို့ ရိုးသားပွင့်လင်းမှုမရှိတာက ဘယ်လောက်ထိအန္တရာယ်များပြီး စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းလဲဆိုတာကို တဖြည်းဖြည်း သိရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် အချစ်သစ်နဲ့ ဆုံရချိန်မှာတော့ လှည့်စားတတ်တဲ့သူမျိုးကို လက်မတွဲမိစေဖို့ အစောကြီးကတည်းက ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသား ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
၄။ ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုရဲ့အရေးပါမှုကို သိလာလို့ပါ။
ချစ်သူရည်းစားဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ပုံမှန်ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုရှိနေဖို့က ရှောင်လွှဲလို့ မရနိုင်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အများစုကတော့ ပထမအချစ်မှာ ဒီအချက်ကို သတိမထားမိတတ်ကြပါဘူး။ ဒီလိုပြောလို့ အချိန်တိုင်းနီးပါး လူချင်းတွေ့ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းဆက်ပြီး ကြူနေဖို့ကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်ဦးသားအကြားမှာ အလေးအနက်စကားတွေ ပြောဆိုတိုင်ပင်တာမျိုးက ပိုပြီးစိတ်ချင်းနီးစပ်နေစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ အိပ်ရာအတွင်းစွမ်းဆောင်ရည် ပိုကောင်းလာလို့ပါ။
သိပ္ပံနည်းကျ ပြောပြချင်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ အမျိုးသမီးတွေဟာ အရွယ်ရောက်လာလေ၊ လိင်မှုကိစ္စခံစားနိုင်စွမ်းများလာလေဖြစ်ပြီး အမျိုးသားတွေမှာဆိုရင်တော့ အိပ်ရာထဲမှာ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်စိတ် နည်းသွားတတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အချိန်နဲ့ အတွေ့အကြုံအရ အတူအိပ်တဲ့အချိန်မှာ နှစ်ဦးစလုံးအတွက် ပိုကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရနိုင်ပါတယ်။
၆။ သင်ပိုပြီး လက်တွေ့ဆန်လာလို့ပါ။
အချစ်ဦးနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာ မုန်တိုင်းထန်ခဲ့ပြီး ဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံတွေ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာ သင့်အနေနဲ့ ပိုပြီး လက်တွေ့ဆန်လာတတ်သလို ချစ်မှုရေးရာကိစ္စတစ်ခုအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့ စံနှုန်းတွေနဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ပိုမိသိရှိအကျွမ်းဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
၇။ ခံစားမှုတွေကို ထိန်းတတ်လာလို့ပါ။
ပထမချစ်ဦးသူနဲ့အကြားမှာ စိတ်ရှုပ်စရာတွေ၊ ခေါင်းကိုက်စရာကိစ္စတွေနဲ့ အများကြီးကြုံခဲ့ရဖူးမှာပါ။ ဒီအတွေ့အကြုံတွေအားလုံးက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခံစားမှုတွေကို ပိုပြီးရင့်ကျက်လာစေပြီး အလွန်အကျွံ မခံစားတတ်အောင် ထိန်းနိုင်လာစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အချစ်သစ်နဲ့ ဆုံဆည်းရချိန်မှာ တချို့ကိစ္စတွေကို ပြောင်းလဲဖို့ ထိန်းချုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို သဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဥပမာအားဖြင့် သင့်ချစ်သူရဲ့ နောက်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာသိလာခဲ့ရင်တောင် အရမ်းအရေးမကြီးရင် ထုတ်မေးဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မေးဖြစ်ရင်လည်း ဖြေရှင်းချက်ကို လက်ခံနိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
၈။ အသေးအမွှားကိစ္စတွေကို နားလည်တတ်လာလို့ပါ။
များသောအားဖြင့် ပထမအချစ်မှာ အရမ်းကို သဲသဲလှုပ်ဖြစ်နေတတ်ကြပြီး ဘာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စလေးတွေအတွက်နဲ့ အငြင်းပွားကြရတတ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ ဒီကိစ္စလေးတွေမှာ နားလည်အလျှော့ပေးလိုက်တတ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
၉။ ပိုပြီး ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်လာလို့ပါ။
သင်အရူးအမူးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အချစ်ဦးက အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀က ဖြစ်နိုင်ပြီး အချစ်သစ်ကတော့ ဒီထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့ အရွယ်မှာတွေ့ကြုံရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်လာရတာက အသက်အရွယ်ကြီးလာတာတစ်ခုတည်းကြောင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပထမအကြိမ်မှာ သင်မလိုချင်တဲ့အရာတွေ ဖြစ်ပျက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာ ဘာဖြစ်ချစ်တာလဲ ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတာကြောင့်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
၁၀။ အမှားကတွေကို သင်ခန်းစာယူတတ်သွားလို့ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်။ အမှားတွေက နာကျဉ်စရာကောင်းပြီး စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပေမယ့် သင့်ကိုရင့်ကျက်သွားအောင် သင်ကြားပြသပေးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် အချစ်ဦးနဲ့တုန်းက သူမအပေါ်ကို စိုးရိမ်တကြီး စွဲလမ်းငြိတွယ်မိခဲ့ပေမယ့် အချစ်သစ်နဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာတော့ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ စိတ်ထဲထားရမလဲ ဆိုတာကို နားလည်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ သင့်ရဲ့အမှားတွေက ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အချစ်တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ လမ်းကြောင်းပြပေးသွားနိုင်ပါတယ်။
ခဈြဦးသူနဲ့ ကှကှေငျးရပွီး နောကျထပျအခဈြသဈနဲ့ကွုံတှရေ့တဲ့အခါမှာ ပိုပြျောဖို့ကောငျးတယျလို့ ပွောလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါဟာ တကယျရော မှနျကနျရဲ့လား? အကွောငျးရငျးကတော့ ပထမအခဈြမှာ ထိခိုကျနာကငျြစရာတှေ ကွုံတှခေဲ့ရလို့ ဒါမှမဟုတျ အခဈြနဲ့ပတျသကျပွီး စာပိုတတျသှားလို့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဒုတိယအခဈြက အခဈြဦးထကျ သာလှနျကောငျးမှနျရတဲ့ အကွောငျးရငျး (၁၀)ခု ကို ဖျောပွလိုပါတယျ။
၁။ မိမိတနျဖိုးကို သိရှိလာလို့ပါ။
ဒုတိယအခဈြနဲ့ တှဆေုံ့ကွခြိနျမှာ အမြားစုက လောကကွီးအကွောငျးကို သိရှိနားလညျလာကွပွီး ကိုယျ့တနျဖိုးကို ကိုယျတိုငျမွှငျ့တငျထားတတျကွပွီဖွဈပါတယျ။ ကိုယျ့အရညျအခငျြး၊ ကိုယျ့တနျဖိုးကို သခြောသိလာပွီဖွဈတဲ့အတှကျ ပိုမိုထိုကျတနျတဲ့သူမြိုးနဲ့ နဖူးစာဆုံတတျကွရပါတယျ။
၂။ ကတိသစ်စာတရားကို ပိုတနျဖိုးထားတတျလာလို့ပါ။
ဒီအခကျြက တညျငွိမျရငျ့ကကျြလာတာနဲ့လညျး ဆိုငျပါတယျ။ ပထမအခဈြဦးနဲ့ဆကျဆံရေးမှာဆိုရငျ နှဈဦးစလုံးက ခဈြသူနှဈဦးကွားက ကတိသစ်စားတရားကို အပွညျ့အဝနားလညျနိုငျဦးမှာ မဟုတျပါဘူး။ ခဈြသူနှဈဦးကွားက ကတိသစ်စာဆိုတာက လိုအပျတဲ့အခြိနျမှာရှိနပေေးတာ၊ ခြိနျးတဲ့နမှေ့ာ ရောကျလာပေးတာတှအေပွငျ နှဈဦးသားအနာဂတျအတှကျ ကွိုတငျပွငျဆငျတာ၊ ရညျမှနျးခကျြတှထေားရှိ လြှောကျလှမျးတာတှကေိုပါ ဆိုလိုတာဖွဈပါတယျ။
၃။ ရိုးသားမှုက အရေးကွီးတာကို သိလာလို့ပါ။
ပထမအကွိမျမှာ သငျ့ခဈြသူရဲ့ အခြို့သောလြို့ဝှကျထိနျခနျြမှုတှကေို သငျခှငျ့ပွုထားမိမှာပါ။ တကယျတော့ ဒီလို့ ရိုးသားပှငျ့လငျးမှုမရှိတာက ဘယျလောကျထိအန်တရာယျမြားပွီး စိတျဆငျးရဲစရာကောငျးလဲဆိုတာကို တဖွညျးဖွညျး သိရှိလာပါလိမျ့မယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အခဈြသဈနဲ့ ဆုံရခြိနျမှာတော့ လှညျ့စားတတျတဲ့သူမြိုးကို လကျမတှဲမိစဖေို့ အစောကွီးကတညျးက ဆုံးဖွတျထားပွီးသား ဖွဈနတေတျပါတယျ။
၄။ ဆကျသှယျပွောဆိုမှုရဲ့အရေးပါမှုကို သိလာလို့ပါ။
ခဈြသူရညျးစားဆကျဆံရေးတဈခုမှာ တဈဦးနဲ့တဈဦး ပုံမှနျပွောဆိုဆကျသှယျမှုရှိနဖေို့က ရှောငျလှဲလို့ မရနိုငျတဲ့ ကိစ်စတဈခုဖွဈပါတယျ။ အမြားစုကတော့ ပထမအခဈြမှာ ဒီအခကျြကို သတိမထားမိတတျကွပါဘူး။ ဒီလိုပွောလို့ အခြိနျတိုငျးနီးပါး လူခငျြးတှေ့ ဒါမှမဟုတျ ဖုနျးဆကျပွီး ကွူနဖေို့ကို ဆိုလိုတာမဟုတျပါဘူး။ နှဈဦးသားအကွားမှာ အလေးအနကျစကားတှေ ပွောဆိုတိုငျပငျတာမြိုးက ပိုပွီးစိတျခငျြးနီးစပျနစေနေိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
၅။ အိပျရာအတှငျးစှမျးဆောငျရညျ ပိုကောငျးလာလို့ပါ။
သိပ်ပံနညျးကြ ပွောပွခငျြပါတယျ။ လလေ့ာမှုတှအေရ အမြိုးသမီးတှဟော အရှယျရောကျလာလေ၊ လိငျမှုကိစ်စခံစားနိုငျစှမျးမြားလာလဖွေဈပွီး အမြိုးသားတှမှောဆိုရငျတော့ အိပျရာထဲမှာ တဈကိုယျကောငျးဆနျစိတျ နညျးသှားတတျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အခြိနျနဲ့ အတှအေ့ကွုံအရ အတူအိပျတဲ့အခြိနျမှာ နှဈဦးစလုံးအတှကျ ပိုကောငျးတဲ့အတှအေ့ကွုံတှရေနိုငျပါတယျ။
၆။ သငျပိုပွီး လကျတှဆေ့နျလာလို့ပါ။
အခဈြဦးနဲ့ဆကျဆံရေးမှာ မုနျတိုငျးထနျခဲ့ပွီး ဆုံးရှုံးမှုတှကွေုံတှရေ့ပွီးတဲ့နောကျမှာ သငျ့အနနေဲ့ ပိုပွီး လကျတှဆေ့နျလာတတျသလို ခဈြမှုရေးရာကိစ်စတဈခုအပျေါလှမျးမိုးမှုရှိတဲ့ စံနှုနျးတှနေဲ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှကေို ပိုမိသိရှိအကြှမျးဝငျလာမှာဖွဈပါတယျ။
၇။ ခံစားမှုတှကေို ထိနျးတတျလာလို့ပါ။
ပထမခဈြဦးသူနဲ့အကွားမှာ စိတျရှုပျစရာတှေ၊ ခေါငျးကိုကျစရာကိစ်စတှနေဲ့ အမြားကွီးကွုံခဲ့ရဖူးမှာပါ။ ဒီအတှအေ့ကွုံတှအေားလုံးက ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ခံစားမှုတှကေို ပိုပွီးရငျ့ကကျြလာစပွေီး အလှနျအကြှံ မခံစားတတျအောငျ ထိနျးနိုငျလာစပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အခဈြသဈနဲ့ ဆုံဆညျးရခြိနျမှာ တခြို့ကိစ်စတှကေို ပွောငျးလဲဖို့ ထိနျးခြုပျဖို့ မဖွဈနိုငျဘူးဆိုတာကို သဘောပေါကျပွီးသားဖွဈမှာပါ။ ဥပမာအားဖွငျ့ သငျ့ခဈြသူရဲ့ နောကျကွောငျးနဲ့ပတျသကျပွီး တဈစုံတဈရာသိလာခဲ့ရငျတောငျ အရမျးအရေးမကွီးရငျ ထုတျမေးဖွဈမှာ မဟုတျပါဘူး။ မေးဖွဈရငျလညျး ဖွရှေငျးခကျြကို လကျခံနိုငျလာမှာဖွဈပါတယျ။
၈။ အသေးအမှားကိစ်စတှကေို နားလညျတတျလာလို့ပါ။
မြားသောအားဖွငျ့ ပထမအခဈြမှာ အရမျးကို သဲသဲလှုပျဖွဈနတေတျကွပွီး ဘာမဟုတျတဲ့ ကိစ်စလေးတှအေတှကျနဲ့ အငွငျးပှားကွရတတျပါတယျ။ တကယျတမျးတော့ ဒီကိစ်စလေးတှမှော နားလညျအလြှော့ပေးလိုကျတတျဖို့က ပိုအရေးကွီးပါတယျ။
၉။ ပိုပွီး ရငျ့ကကျြတညျငွိမျလာလို့ပါ။
သငျအရူးအမူးဖွဈခဲ့ရတဲ့ အခဈြဦးက အထကျတနျးကြောငျးသားဘဝက ဖွဈနိုငျပွီး အခဈြသဈကတော့ ဒီထကျပိုမိုတညျငွိမျရငျ့ကကျြတဲ့ အရှယျမှာတှကွေုံ့ရတာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ ဒီလို ရငျ့ကကျြတညျငွိမျလာရတာက အသကျအရှယျကွီးလာတာတဈခုတညျးကွောငျ့တော့ မဟုတျပါဘူး။ ပထမအကွိမျမှာ သငျမလိုခငျြတဲ့အရာတှေ ဖွဈပကျြကွုံတှခေဲ့ရပွီးတဲ့နောကျမှာ ဘာဖွဈခဈြတာလဲ ဆိုတာကို ရှငျးရှငျးလငျးလငျးသိသှားတာကွောငျ့လညျး ပါဝငျပါတယျ။
၁၀။ အမှားကတှကေို သငျခနျးစာယူတတျသှားလို့ပါ။
ဟုတျပါတယျ။ အမှားတှကေ နာကဉျြစရာကောငျးပွီး စိတျပကျြစရာဖွဈပမေယျ့ သငျ့ကိုရငျ့ကကျြသှားအောငျ သငျကွားပွသပေးနိုငျပါတယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ပွောရမယျဆိုရငျ အခဈြဦးနဲ့တုနျးက သူမအပျေါကို စိုးရိမျတကွီး စှဲလမျးငွိတှယျမိခဲ့ပမေယျ့ အခဈြသဈနဲ့တှဆေုံ့ခြိနျမှာတော့ ဘယျလောကျအတိုငျးအတာထိ စိတျထဲထားရမလဲ ဆိုတာကို နားလညျထားပွီးသားဖွဈမှာပါ။ သငျ့ရဲ့အမှားတှကေ ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ အခဈြတဈခုတညျဆောကျနိုငျဖို့ လမျးကွောငျးပွပေးသှားနိုငျပါတယျ။